Miorina eo ambony vatolampy
“Koa amin’izany na zovy na zovy no mandre izany teniko izany ka mankato azy, dia hoharina amin’ny lehilahy manatsaina izy, izay nanorina ny tranony teo ambonin’ny vatolampy” Mat. 7:24.
Rehefa mijoro eto ianao ankehitriny ary mahita ireo tsy fahatanterahan’ny toetranao eo anatrehan’ny faneva ara-panahy lehibe an’Andriamanitra, dia tsy hilaza ve ianao hoe: “Hareniko ny lasako, ary hiasa amin’ny tanimboaloky ny Tompo aho”? Rehefa miaina ny finoana ianao, tsy hifikitra amin’ny teny fikasan’Andriamanitra ve ianao, sy handray ny fahamarinan’i Kristy ary hahita fahazavan’ny lanitra manazava ny fiainanao? Tokony ho eo anilanao Kristy amin’ny eritreritrao sy fihetsikao. Ny fifandraisana simba iray amin’ny rojo dia mahatonga izany ho tsy azo ampiasaina, koa tsy fahatanterahana iray amin’ny toetranao dia hahatonga anao tsy ho tafiditry ny fanjakan’ny lanitra. Tokony halaminao ny zavatra rehetra. Saingy, tsy afaka ny hanao izany ianao raha tsy eo ny fanampian’Andriamanitra. Vonona ny hanaiky ny teny fikasan’Andriamanitra ve ianao, ary handray izany ho anao amin’ny alalan’ny finoana velona ny Teniny tsy miova?
Tokony handeha amin’ny finoana ianao fa tsy amin’ny fahatsapana. Tsy mila ny fivavahana feno fientanam-po isika; fa fivavahana miorina amin’ny finoana mahay mandanjalanja. Mametraka ny tongotsika eo amin’ilay vatolampy mandrakizay, dia ny Tenin’Andriamanitra, io finoana io.
Miatrika zava-tsarotra isika ary mihorohoro aho ny amin’ny fanahintsika. Nahoana isika no mahita olona mandao ny finoany? Eo amin’ny toerana izay tokony hahafantarantsika izay inoantsika ve isika ary tsy ho voaozongozona? Aoka mba tsy hahakivy antsika ny mahita ireo fanahy mandao ny fahamarinana, fa hanosika antsika hikatsaka amim-pahatokiana kokoa ny fitahian’Andriamanitra. Tsy ny fianarana na talenta na toeram-boninahitry ny olona no hahavonjy azy ireo. Tokony harovan’ny herin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny finoana ho amin’ny famonjena isika.
Ahoana ny amin’ny toerana misy anao eo anatrehan’Andriamanitra ankehitriny? Ny olana dia tsy hoe fomba ahoana no hahafaranao amin’ny andro fahoriana na amin’ny hoavy? Ahoana ny amin’ny fanahinao ankehitriny? Andeha hiasa ve ianao anio? Mila fanandramana manokana, isambatan’olona isika anio. Irintsika ny fanatrehan’i Kristy anio.